UF-300 Real-oge PCR System flyer v1.0
Pseudorabies virus (gB) ihe nchọpụta PCR
E.coli O157: H7 PCR na-achọpụta ihe
MA-6000 Real Oge PCR Sistemụ
CHK-800 Automatic nucleic acid wepụ
CHK-16A Automatic Nucleic Acid Mmịpụta Sistemụ
Ogologo oge nke ule PCR na ihe dị egwu na nke dị arọ abụwo ihe ndị bụ isi na-egbochi mgbasa nke usoro nchọpụta a doro anya na nke na-emetụ n'ahụ na ngwa nyocha nke nlekọta.
UF-300 Real-oge PCR System
Ngwa ngwa, kọmpat na kensinammuo Platform maka Nlekọta Ọrịa Molekụla Nlekọta
◦ Patented mgbawa dabeere mmeghachi omume na-enye ngwa ngwa mmepụta- "40 Cycles na 20 Nkeji".
Interface interface interface (LCD panel) na-eme ka ule dị mfe ma dị mfe.
Obere akara aka nke ikpo okwu na-eme ka ọ dị mma maka ngwa nyocha nlebara anya.
◦ Ọrụ DC na ike oriri dị ala (ịrụ ọrụ batrị ga-ekwe omume.)
Mma okpomọkụ ziri ezi na ịdị n'otu izute chọrọ na nchọpụta nsogbu.
Ihe nlereanya nwere ọwa nchọpụta abụọ (FAM / ROX) dị.
Ọfụma ọhụụ iji mee ka nyocha PCR gị ọsọ ọsọ
Ogologo oge nke ule PCR na ihe dị egwu na nke dị arọ abụwo ihe ndị bụ isi na-egbochi mgbasa nke usoro nchọpụta a doro anya na nke na-emetụ n'ahụ na ngwa nyocha nke nlekọta. Genesystem meputara usoro PCR nke microfluidic nke jikoro ya na ngwaike ngwaike nke oma nke na-ebelata TAT nke PCR ule n'okpuru 20 nkeji. Nyiwe GENECHECKER® nakweere proprietary polymer chip (Rapi: chip ™) nke na-enyere ọbụna ngwa ngwa
ọgwụgwọ okpomọkụ nke ihe atụ dị na ya karịa nke iji PCR tubes na ngwa PCR. Igwe igwe na-agba ọsọ nke GENECHECKER® na-enweta 8 Celsius C / sec ramping ọnụego maka kpo oku na obi jụrụ. Usoro nyocha pụrụ iche na teknụzụ ọgbara ọhụrụ nke GENECHECKERC na-eme ka PCR nwalee ngwa ngwa karịa mgbe ọ bụla.
Integrated aka obubọk ọrụ interface maka kensinammuo njikwa
GENECHECKER® UF-300 sistemụ PCR nke oge nwere usoro mkpịsị aka aka n'elu ka ndị ọrụ wee nwee ike ịmịnye akụkụ ahụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. Nke a 8 inch sized panel ka nke TFT ngosi iji nye echiche na-enwu gbaa na nzaghachi ngwa ngwa.
Arụ ọrụ emelitere maka ngwa nyocha siri ike
Ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ pụrụ iche nke mmeghachi omume ngwa ngwa, GENECHECKER® UF-300 sistemụ PCR nke oge na-enye mmụba nke okpomọkụ na ịdị n'otu na-atụnyere nsụgharị GENECHECKER® nke mbụ. Na-agbakwunye na ihe nlereanya ahụ nwere otu ọwa nchọpụta (FAM), nke nwere ọwa nchọpụta abụọ (FAM / ROX) dịkwa maka ngwa ndị na-achọ ịme njikwa dị n'ime.
Usoro ọrụ Kpọmkwem akara nke peltier mmewere
Okpomoku ziri ezi ± 0,2 Celsius
Okpomoku di na nwunye ± 0.2 ° C (nke ọma)
Okpomoku kwụsie ike 8 Celsius C / abụọ
Ọnụego Ramping 8 Celsius C / abụọ
Nso nke ọnọdụ okpomọkụ 1 ~ 99 ° C (0.1 ° C mkpebi)
Sample Format Polymer dabeere mgbawa microfluidic nke nwere akụkụ 3
Number nke Sample kwa Run 10
Mmeghachi Omume 10μl
Ofzọ Nchọpụta N'iji usoro mgba ọkụ na-eji usoro CMOS
Ngosipụta na Ntuziaka Onye ọrụ 7 inch TFT ngosi capacitive aka obubọk
Ofdị Obi .tọ High ihie Ikanam
Nchọpụta Channel FAM (otu uzo ozo), FAM / ROX (uzo abuo abuo)
Ebili Mgbapụta (FAM) 472nm + 10nm / (ROX) 575nm + 10nm
Ike AC 110-230V (50-60Hz) Ntinye / DC 12V Nweta
Njikọ USB Type B (ọdụ ụgbọ mmiri 2)
Akụkụ 218 (w) x 200 (d) x 142 (h) mm
Ibu ibu 3,3 n'arọ
Nwamba. Nọmba Nkọwa
1199100600 1199100601 9699100100 9699100101 9699100102 9900300701 GENECHECKER® UF-300 Real-oge PCR Sistem na Single Channel Detection Channel GENECHECKER® UF-300 Real-oge PCR Sistemụ na ọwa abụọ achọpụtara Rapi: mgbawa ™ 10-ọma PCR Chip (S-Pack), Standard Pack (48 PC / PK) Rapi: mgbawa ™ 10-ọma PCR Chip (M-Pack), Medium Pack - 8 PK of Standard Pack Rapi: mgbawa ™ 10-nke ọma PCR Chip (L-Pack), Nnukwu Ihe - 16 PK nke Standard Pack Nhọrọ Ike USB maka Cigarette Power Socket
Mpaghara A, Ntọala 2, idingzụ 5, Chenxiang Road, Jiading District, Shanghai, China
Weebụsaịtị: www.chkbio.cn E-mail: admin@chkbio.com
Nke gara aga: Nlereanya UF-150 Ultra-Fast Real-PCR System oge
Osote: CHK-16A Automatic Nucleic Acid Mmịpụta Sistemụ
Nlereanya UF-150 Ultra-Fast Real-PCR System oge
MA-688 ezigbo oge PCR System